Aqua Bike- ahloniphekile
Uhlaka komzimba aqua ibhayisikili Fanciest is ezenziwe ngensimbi engagqwali 316l futhi amaqabunga electrolytically ophucuziwe. Isihlalo futhi isibambo zenzelwe nge design eliyingqayizivele futhi ezinobungane ukuthi kungase kushintshwe kusukela phambili kuya emuva futhi phansi. Leli sondo amanzi senziwa inayiloni, okuyinto imvelo futhi iqine. Isikhombi ukubopha design kudala ukumelana double ukugeleza kwamanzi futhi sithuthukisa umsebenzi.
6. Isiqinisekiso: 3 iminyaka
I-aqua ibhayisikili ekhiqizwa nge high engagqwali AISI316L obonisa ukuvikelwa anti-ukugqwala ngokuhambisana namazinga omhlaba. Ingaphezulu imikhiqizo esebenzisa ezipholisha electrolytic anti enamathela ezonakalisayo ukuze kuqinisekwe ukuthi ukuqina nobuhle imikhiqizo. Izihlalo ashintshekayo kanye izibambo ukuze kuhlangatshezwane nezidingo abathengi ezihlukahlukene.
Kunezindlela ezimbili ekwazi ukumelana yilezi: ngemicu isondo inayiloni ukukhiqiza ukumelana namanzi ngenkathi ngebhayisikili; Noma ulungise inkinobho ukwandisa endaweni ukuxhumana phakathi pad ukubopha (phezulu isondo gwedla) futhi isondo gwedla ukwandisa ukumelana namanzi. Abasebenzisi angakhetha indlela kuye ngezidingo zabo.
I ibhayisikili aqua ingasetshenziswa ezindaweni ezihlukahlukene ezifana Amahhotela, Spas, amachibi okubhukuda, Impilo kanye imfanelo amaqembu, nezokungcebeleka amakilabhu, izikhungo Medical, Ekhaya, Izikole, Ezemidlalo amaqembu nokunye.
Mayelana Aqua Ukufaneleka:
Aqua ukuqina uhlobo olusha ukuzivocavoca, iletha ndawonye zonke amakilasi yokufaneleka amanzi. Aqua ukuqina kungaqinisa imisebenzi bokuphila, ukukhuthaza kwegazi futhi umzimba imigomo, Okwamanje ukunciphisa umonakalo obangelwa umsebenzi. Aqua ukuqina wenziwa ngezinto ezihlukahlukene (bike, Isigayo, ukuzilolonga kwe-elliptical, njll); kuba umdlalo mnandi.
I-aqua ibhayisikili kuyinto imishini asishintshi neze futhi esebenza kahle ukujabulela aqua ukuphotha Amazing in pool yakho. Ekumelaneni yamanzi, it can ngcono ukukhuthazela senhliziyo ukwanda ukuphefumula umthamo, kuyilapho acwenge imilenze yakho, sculpt izibunu zakho nemisipha besisu. Ingcindezi Water ivala blood pressure, ngempumelelo ekuvimbeleni ukubukeka varicose emithanjeni nokusiza ukuqeda cellulite.
It is ikakhulukazi wabonisa for: kwesisindo, impatho osteoarthritis, ukubhucunga nokunyakazisa umzimba, emuva ukulimala hip, ukuqeqeshwa umgibeli, aqua ukuqina, asebekhulile, isifo rheumatism futhi ukulolonga umzimba ngokuvamile.
Previous: Big Isaphulelo Engagqwali Water Tank mgodi Cover
Okulandelayo: Aqua Bike- Fashion
Fitmax Underwater Hamba
Gym Pool Hamba
Health Club Izinsiza kusebenza
Isikhungo samanzi Hamba
Pool Aqua Hamba
Sea Water Hamba
Engagqwali Hamba Spinning
Engagqwali Water Hamba
Underwater Aqua Hamba
Underwater Aquatic Hamba
Underwater Hamba Spinning
Amanzi Aqua Hamba
Amabhayisikili Water For Sale
Amanzi Hamba Aqua Hamba
Amanzi Hamba Aqua Cycle Pedal
Amanzi Hamba For Sale
Amanzi Hamba Isitolo esidayisa yonke impahla
Amanzi Ukuzivocavoca Hamba
Amanzi Ukufaneleka Izinsiza kusebenza
Amanzi Pedal Hamba
Ifoni: + 86-0532-8908 3155
Ifeksi: + 86-0532-8776 9999